ညဘက်ကို သစ်သီးစားလို့ရရဲ့လား - YOYARLAY Digital Media and News
Published: November 1, 20195:14 pm
ကျွန်တော်တို့အများစုက ညဘက်ရောက်ရင် ချိုတာတစ်ခုခုစားချင်စိတ် ဖြစ်ကြပါတယ်။ သင်က ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချနေတဲ့သူဆိုရင် သင့်ရဲ့ဆာလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အသီးတွေစားပါလိမ့်မယ်။ သစ်သီးတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တယ်၊ အရည်ရွှမ်းတယ်၊ အာဟာရပြည့်တယ်၊ သဘာဝအတိုင်းချိုတယ်။ အခြားသကြားပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေထက် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညဘက်တွေမှာ အသစ်ကို စားသင့်လား၊ မစားသင့်လားဆိုပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်မိကြမှာပါ။ သင့်ရဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်မှုကို ဒီဆောင်းပါးလေးက စိတ်ရှင်းသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေမှာ ညစာစားတာနဲ့ သစ်သီးစားတာကြားမှာ အချိန်ကွာဟချက် ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေနှစ်ခုလုံးက အစာခြေစနစ်မှာ မတူကွဲပြားစွာ သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ လူတစ်ယောက်က အိပ်ရာမဝင်ခင် အနည်းဆုံး (၃ – ၄) နာရီကြိုပြီး ညစာစားသင့်ပါတယ်။ ညစာနဲ့ အသီးကို အတူတူစားမိရင် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က ညစာစားပြီးမှ စားတဲ့အသီးကို အရင်ဆုံး အစာချေဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အစာမကြေတာတွေဖြစ်လာပြီး ညစာကနေရရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
တချို့လူတွေက အိပ်ရာမဝင်ခင် အသီးစားတာက အိပ်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ သစ်သီးတွေက ခန္ဓာကိုယ်က သကြားဓာတ်ကို ထုတ်လွှင့်ပြီး သင့်စွမ်းအင်တွေကို စုပ်ယုတ်စေပါတယ်။ သင့်ကို အိပ်မောကျဖို့ ခက်ခဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောတဲ့အတွက် ညဘက်မှာ သစ်သီးစားလို့ မရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ညစာစားပြီး မိနစ် (၃၀) လောက်မှာ သစ်သီးကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
အိပ်ရာမဝင်ခင် သင့်ရဲ့သစ်သီးရွေးချယ်မှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ညဘက်မှာ သစ်သီးကို ပန်းကန်အပြည့်မစားပါနဲ့။ ဖရဲသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ကီဝီသီးလို အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့၊ သကြားဓာတ်နည်းတဲ့ သစ်သီးတွေကိုသာစားသုံးပါ။ အသီးစားပြီးရင် ချက်ချင်းမအိပ်စက်ပါနဲ့နော်။
Ref: Truth revealed: Should you eat fruits at night?
Previous Previous post: ကန်ဘောင် နှင့် ကန်ပေါင်
Next Next post: American Music Awards ဆုပေးပွဲမှာ Artist of the Decade ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်တော့မယ့် ပေါ့စ်ဘုရင်မတေလာဆွစ်ဖ်
ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ တန် ဝါရှင်တန်စံအိမ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အချက် ၁၉ ချက်
၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ဟာ ယခုစက်တင်ဘာလစာရင်းများအရ ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၈၄.၈ ဘီလီယံရှိပြီး ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Post Views: 3,028
Published: September 29, 20179:43 am Updated: February 7, 201910:55 am
အသောက်များသွားလို့ ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ပြဿနာကို ပြေလည်စေနိုင်မယ့်အချက် (၆) ချက်
TGIF တွေ TGIS တွေမှာသောက်ပြီးလို့ တနင်္ဂနွေဆို ပြဲကွဲနေပြီလား အဲလေ မထနိုင်ဖြစ်နေပြီလား?… သောက်တာလည်းမများဘဲ အရက်နာကျနေပြီလား? တနင်္လာ အလုပ်သွားဖို့ရော ထနိုင်မှာကျိန်းသေရဲ့လား? မပူပါနဲ့…ယမကာတွေကစ်တာများပြီး ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ပြဿနာကို ခဏချင်းပြေလည်သွားမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ကြုံလို့ပြောရရင် အရက်နာကျတယ်ဆိုတာ ဗိုက်ထဲဘာမှမရှိဘဲသောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ…
Published: July 14, 20187:09 am Updated: June 29, 201910:49 pm
၂၀၂၁ခုနှစ်မှာ ငွေကို ဘယ်လိုချွေတာ စုဆောင်းကြမလဲ
နှစ်တစ်နှစ်ကူးပြောင်းတာနဲ့ သင့်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ၊ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို အခုနှစ်မှာ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲဖို့ လိုပါပြီ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စွာ နေထိုင်စားသောက်ဖို့ကတော့ နှစ်တိုင်း လုပ်သင့်တာပါ။ နှစ်ကုန်ရောက်တာနဲ့ ငွေတွေ ပိုပြီးစုဆောင်းမိဖို့အတွက် ၂၀၂၁ခုနှစ်အစမှာပဲ…
Published: January 19, 20219:07 am Updated: 9:08 am